अब विद्यालय एक महिना बन्द हुन सक्ने – Nep Stok
पुष २५, २०७८ आइतबार 93
काठमाडौ । पछिल्लो समय कोभिडको नयाँ भेरियन्टका संक्रमित भेटिएपछि सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले चासो देखाउँदै तत्काल सिसिएमसीको बैठकमा बोलाएर योजना बनाउन भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि सिसिएमसीको बैठकले कोभिड रोकथामका लागि योजना बनाउन थालेको छ । संक्रमण फैलिन नदिनका लागि शैक्षिक संस्थाहरुमा हिउँदे बिदा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म थप गर्ने तयारी भएको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) मा विद्यालय तथा कलेजहरुमा अहिले जाडो बिदा हुने क्रम सुरु भएको र भाइरसको संक्रमण पनि बढ्दो क्रममा देखिएकाले जाडो बिदालाई बढीमा एक महिनासम्म थप गर्ने गरी छलफल भइरहेको हो ।
सिसिएमसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले भनिन्, ‘अहिले केही निर्णय भएको छैन । तर छलफल भने जारी छ । संक्रमण बढ्दै तथ्यलाई मध्यनजर गरेर जाडो बिदा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म थप गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’
तत्काल पठनपाठन भर्च्युअल गर्ने बारे कुरा नभएको पनि उनले बताइन् । जाडो बिदा लम्ब्याएपछिको अवस्था पनि सुधार नभएमा थप के गर्ने भनेर छलफल हुने सिसिएमसीले जनाएको छ ।
हालै आठौँ महाधिवेशन सकेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, रामप्रसाद सापकोटा, सुवोध शेर्पाली, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष पञ्चा सिंह, वाईसीएल अध्यक्ष सुमन देवकोटा, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत नेताहरूलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी पत्रकारहरूमा पनि संक्रमण भएको छ । साथै माओवादी कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकाल र शिव खकुरेलबाहेक सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय, एविन्द्र पराजुलीसहितलाई संक्रमण भएको छ ।
माओवादी केन्द्रीय सरकारमा आवद्ध छ । महाधिवेशनमा सहभागी भएका पम्फा भुसा, जनार्दन, देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ, महेश्वरजंग गहतराज माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद्मा छन् । जस कारण सरकारका मन्त्री पनि संक्रमणको जोखिममा छन् ।
प्रचण्डसँग भेटेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा बसिसकेका छन् । पछिल्लो महिनायता राजनीतिक दलका महाधिवेशन र गतिविधिले संक्रमण जोखिम बढाएको भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ । देशभरबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ता जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरी सहभागी गराएर राजनीतिक गतिविधि गरिएको थियो ।
Prevबालबालिकालाई जोगाउन १५ दिन विद्यालय बन्द !
Nextमोटि दिदिको सेलरोटी कथा : ८ महिनाको गर्भ हुँदा श्रीमान विते, अहिले त्यही छोराले हेर्दैन, सिरानीमा वि ष राखेकीछु-हात खुट्टा चल्न छोडेपछि त्यही खाने हो (भिडियो)
अफगानिस्तानमा भो’कमरी ! आफ्नै बालबालिका’को अ ङ्ग नै बे’चेर गु’जारा चलाउँदै